अमेरिकाको कोलोरोडोमा बस्नु हुने उत्सुक अधिकारीको प्रयास र प्रायोजकमा रोटरी क्लब तनहुँ दमौलीका सदस्यहरु र प्रहरीहरुलाई साईबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण । — Cyber Headline
अमेरिकाको कोलोरोडोमा बस्नु हुने उत्सुक अधिकारीको प्रयास र प्रायोजकमा रोटरी क्लब तनहुँ दमौलीका सदस्यहरु र प्रहरीहरुलाई साईबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
September 10, 2017 / Ramhari Subedi
बिष्णु प्रिया रिजाल, दमौली, भाद्र २४ - साइवर सेक्युरीटी इन्टरन्यासनल द्वारा दमौलीमा साइवर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धमा एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रोटरी क्लब र रोट्र्याक्ट क्लव दमौलीका सदस्यहरु लाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रोटरी क्लब दमौलीका सदस्य हाल डेनभर कोलोराडो, अमेरीका निवासी उत्सुक अधिकारीले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको थियो । उक्त अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चार जना प्रहरीहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । साथै उक्त अवसरमा रोटरी क्लब दमौलीका पूर्व अध्यक्ष देव कुमार श्रेष्ठ, राजिनलाल श्रेष्ठ, क्या. तारालाल मल्ल, रामकुमार श्रेष्ठ लगायत ४५ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रको सहजिकरण साइवर सेक्युरीटी इन्टरन्यासनलका तनहुँ जिल्ला संयोजक एवं प्रशिक्षक गिरीजा सुवेदीका साथै चितवन जिल्ला संयोजक एवं प्रशिक्षक पुजा गुरुङले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा रोटरी क्लब दमौलीका पूर्व अध्यक्ष रजिनलाल श्रेष्ठले कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । साथै जिल्ला प्रहरीकार्यालयका सहभागीले यस किसिमको कार्यक्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सहभागी गराइएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत यस किसिमको कार्यक्रमलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनका लागि जोड दिनु पर्ने वताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा संस्थाको तर्फबाट सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरीएको थियो भने रोट¥याक्ट क्लब दमौलीका अध्यक्ष शिखरलाल डोटेलले धन्यबाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।
अहिले भईरहेको साईबर अपराधबाट कसरि बच्ने र फोन, फेसबुक, ईन्टरनेट, कम्प्युटर, वाईफाईलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले चलाउने भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको थियो । साईबर सुरक्षाको बारेमा जनचेतना जगाउने अभिप्रायले साईबर सेक्युरिटी ईन्टरन्यासनल अमेरिका र नेपालद्वार बिगत २ बर्ष देखि नेपालका बिभिन्न जिल्लाहरुमा स्कुल, क्याम्पस, कार्यालयहरुमा यो प्रयोगात्मक तालिम संञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
अहिले सम्मको कार्यक्रमहरुबाट २० हजार भन्दा बढि सहभागिहरु लाभान्वित भैसकेका छन । यस कार्यक्रमका जन्मदाता संचालक हाल अमेरिका निवासी साईबर सुरक्षा बिशेषज्ञ प्राध्यापक डा. रामहरि सुबेदी हुनुहुन्छ ।डा. सुबेदीलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान बिभगले साईबर सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा पनि नियुक्ती गरेको छ । अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसी, काठमाण्डौं, चितवन, झापा जिल्लाहरुमा साईबर सेक्युरिटी ईन्टरन्यासनलको उपसाखाहरु पनि रहेको छ । यदि याहाँहरुले पनि आफ्नो स्कुल, क्याम्पस, समाजमा पनि साईबर सुरक्षा सम्बन्धि तालिम लिन र दिन चाहानुहुन्छ भने Cyberheadline@hotmail.com मा संर्पक गर्न सक्नु हुनेछ ।
September 10, 2017 / Ramhari Subedi/ Comment
अमेरिकाको न्युयोर्क निवासी ...
अन्नपुर्ण मावी पार्वतीपुर चितवनमा ...